Taliyeyaal cusub oo loo magacaabay Saldhigyada Booliska Muqdisho | Wardoon
Home Somali News Taliyeyaal cusub oo loo magacaabay Saldhigyada Booliska Muqdisho
Taliyeyaal cusub oo loo magacaabay Saldhigyada Booliska Muqdisho
Hoos ka akhriso magacyada taliyeyaasha cusub
1- Maxamed Jeego oo hore u ahaa Taliye Kuxigeenkii Nabadsugida gobolka Banaadir, waxaa hada loo magacaabay Taliye Ku Xigeenka Booliska qaybta guud ee Gobolka Banaadir.
2- Cabdi Fitaax Mire oo ahaa Taliyihii degmada Hodan, waxaa loo magacaabay Taliyaha qeybta Waliyo Cadde ee booliska, iyadoo Kuxigeen looga dhigay Shuceyb Abdi.
3- Yaasiin Nur Khayre, waxaa loo magacaabay Taliye Ku xigeenka qeybta bartamaha .
4- Bashiir Cabdi SIyaad, waxaa loo magacaabay Taliyaha Saldhiga booliska degmada Hodan.
5- Najiib Carab, waxaa loo magacaabay Taliyaha Saldhigga booliska degmada Boondheere.
6- Liibaan Shidane, waxaa loo magacaabay Taliyaha Saldhigga booliska degmada Kaaraan.
7- Xuseen Cadceed oo si KMG-ah u hayay xilka Taliyaha Saldhiga Warta-Nabada tan iyo markii la dilay Taliyihii hore macalin Daahir, ayaa Caawa si rasmi ah xilkaasi loogu magacaabay.
8- Ismaaciil Muuse Yuusuf, waxaa loo magacaabay Taliyaha Saldhigga booliska Dharkiinley.
9- Axmed Taree, waxaa loo magacaabay Taliyaha Saldhigga booliska degmada Kaxda
10- Axmed Khadar, waxaa loo magacaabay Taliyaha Saldhigga booliska degmada Xamar weyne.
11- Maxamed C/qaadir, waxaa loo magacaabay Taliyaha Saldhigga booliska degmada Waaberi, waxaana Kuxigeen looga dhigay gabar lagu magacaabo Taliso Abtidoon.
Previous articleWasiir kuxigeenka shaqada iyo shaqaalaha oo ku geeriyooday qaraxii xarunta wasaaradda
Next articleDAAWO:- Cali Khaliif Galaydh “Wixii aanu Muqdisho ka diidnay, Hargeisa kama yeeli doono”
Golaha Ammaanka oo maanta ansixiyo howlgalka ATMIS ee Soomaaliya
DAAWO:-Daahir calasow oo Geel ugu deeqay ciidamada badbaada qaran